Nyamavhuvhu 10, 2018 arun
WeChat nemiedzo blockchain invoicing kuti nokukurumidza refunds kuti kambani mari
Tech Zirume Tencent anofunga blockchain anogona rikurumidze mari kuti mari vashandi kambani uye zviri trialing zvakakurumbira pamusoro wayo WeChat Anwendung kudaro. Tencent akaita piloted kushanda pane imwe munharaunda kuresitorendi Shenzhen, China, uko rokushandisa akabhadhara bhiri kuburikidza ayo huripo kubhadhara basa WeChat Pay.
Nokudyisa muripo Data pamusoro wayo blockchain chikuva kuti rokushandisa mushandirwi, muresitorendi uye Shenzhen romunharaunda iyoyo mutero simba, Tencent akati sokunonoka anowanzoita vasangana nomukombiyuta mureza Chinyorwa dzinofunga muitiro zvinopedzwa. Zvinoshamisa, ichi akazoita kuwanda falsified pakutengeserana zviri zvishoma mune China senzira kusabhadhara mitero. Tencent akati nokuisa issuance mutoo uri traceable blockchain, zvingava kupa mutero zviremera ane paperless mitero yezvinhu Via iyo inogona chamber riparadzirwe pakutengeserana.
Singapore VC makasimba anotangazve $ 10M vakazvitsaurira cryptocurrency Fund
Singaporean asingashumbi guta rakasimba Golden Gate Ventures ari nezvekutanga chii sokuti kuva Southeast Asia raMwari “wokutanga vakazvitsaurira VC cryptocurrency Fund” ne $10 mamiriyoni inivhesitimendi guru. Ainzi LuneX Ventures, uhu vachaona “Laser-kufanana pfungwa” pamusoro cryptocurrency & blockchain nzvimbo nokupedza mukuvamba-Danho startups kusanganisira crypto exchanges.
Akatanga mudiwa Kenrick Drijkoningen akati "Tinoona blockchain somunhu hwaro zvemichina, pamusoro ndima chete kana zvimwe zvikuru Indaneti iri anonetsa zvinogona. Right ikozvino Kutara vaburukira anonzwisisa nhanho uye indasitiri wava kusanduka kubva mapiyona kune mangwanani adopters, iri nguva huru kutanga bhizimisi. "Beyond cryptocurrency exchanges, uhu kuchaitawo kunanga startups vanofunga kugadzirisa muchitokisi & kuchengeteka zvinodiwa zviri crypto zvekutepfenyura, somuenzaniso "zvechechi mabasa" chichange zvakanangwa.
World Bank & Australia kwakaita CommBank kuti ape wokutanga blockchain chisungo
The World Bank Group akaita partnered pamwe Commonwealth Bank of Australia (CommBank) kuti ape chisungo pamusoro blockchain. CommBank, mumwe “Big 4” yezvokutengeserana mabhanga mu Australia, Vakati akahwina atenderwa kubva World Bank kuti kuronga issuance wemurandakadzi, izvo zvichashandiswa akasika, Kutamiswa uye vakakwanisa inotumirwa munhu blockchain pakakwirira.
The Michina, kare yakataurwa CommBank muna-imba blockchain yezvirwere, ndehwokuti kuva kumapati anokosha chisungo issuance kwacho zvakadai makambani uye nemabhangi kuti chikamu nodes ari vakaparadzira samambure. Capital nokuti chisungo anogona vachamutswa uye transacted zvakanyanya. The World Bank anonzi okudenha $50 bhiriyoni akasungwa gore negore kuderedza urombo uye kuvandudza kuenderera nokuda kumisika yose. Denis Robitaille, CIO panguva World Bank, akati “Ichi chisungo kupayona kunokoshawo mukuedza kwedu kudzidza sei tinogona mazano edu nyika nemhosva pamusoro mikana uye kuisa kuti anonetsa ruzivo kupa sezvatinoedza vabudirire Sustainable Development Goals.”
Cryptocurrency vachaumba 5% US bhizimisi iri 2019
Traditional Investments akadai Real Estate, mumatanda uye hurumende zvisungo vangave favorite pakati US vanoita asi crypto haifaniri kurerutswa sezvo akakwezva kufarira zvinenge zvakawanda ETFs. Maererano neimwe ongororo kuitwa The Harris Poll nokuda American Institute of CPAs, pakati 35% vokuAmerica uyo parizvino mari kana vari kuronga kuita kudaro 2019, cryptocurrencies achaita vanoumba 5% kwavo inivhesitimendi Mix. Izvi akafananidza zvakanaka mari mukutsinhana-mhindu iro vanoumba 8% of nemigove mumabhizimisi.
Maererano chete kudzidza, pedyo 50% vakuru mu mamiriro ezvoupfumi munyika kumbonyatsoziva hapana kunzwisisa cryptocurrencies. Sachigaro weNational CPA Financial Literacy Commission of AICPA, Greg Anton, Nemwoyo zano: "Before vokuAmerica mari mari dzavo zvakaoma yakatsakatika, zvakakosha kuti kudzora ramangwana ravo zvemari uye kuita tsvakurudzo ... A zvakanaka akaongorora uye zvakanaka-siyana Portfolio rinoenderana ane vanoita njodzi shiviriro achapa chivimbo kuti varambe vakaomerera-refu urongwa uye kukudzivirira kubva muedzo kutengesa panguva ndokwenguva izwi mutengo ndatsamwa. "
Graciela Mari anoti:
Nyamavhuvhu 28, 2018 pa 1:54 PM